राष्ट्रिय – Nepal Online Khabar
Jan122021 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र भारत दुई देश आकारमा सानो ठूलो भए पनि राष्ट्रको हैसियतमा दुबै देश बराबर भएको बताउनु भएको छ । सार्वभौमसत्ताको रुपमा कुनै पनि देश ठूलो सानो नभएको उहाँको भनाइ छ । भारतीय न्युज च्यानल जी न्युजका सम्पादक सुधीर चौधरीसँगको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच पनि उमेरमा घटी बढी भए पनि दुबैको बराबर हैसियत भएको बताउनुभयो। चौधरीसँगको अन्तरवार्ता गएराती प्रशारण भएको थियो । चौधरी ओलीलाई खुइलाउने अभियान चलाएका व्यक्ति हुन् । उनले प्रधानमन्त्री ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीचको भेटको विषयलाई लिएर मानहानी र दुष्प्रचार गरेका थिए । जसका कारण नेपालका केही मल्टी सिस्टम अपरेटरहरुले भारतीय समाचार च्यानलको प्रसारण बन्द गरेपछि चौधरीले विवादित ट्वीट गरेका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘नेपालले भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण
कोभिड–१९ सं,क्रमणसँगै नेपालमा पनि लक डाउन सुरु भयो । विश्व परिवेशमा लक डाउन सुरु भएको लामो समय भइसकेको थियो । विस्तारै संक्र'मितको सेवाका लागि रोबटहरु बन्न थालेको समाचारहरु आइरहेका थिए । त्यतिबेला नै मलाई नेपालमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको थियो । म नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) मा कार्यरत छु । नास्टमा पनि सरहरुले यस विषयमा कुरा गर्नुभयो । हाम्रो आफ्नै ल्याब थियो । दुई–तीन जना साथीहरु हायर गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो । अहिले कोभिडको परिस्थितिमा मास्क र सेनिटाइजर सम्बन्धी जनचेतना फै'लाउने किसिमको रोबट बनाउने विषयमा सल्लाह भयो । अहिले स्वयंमसेवीको मास्क दिने, सेनिटाइजर दिने खालको बनाउने र पछि आवश्यकताअनुसार अन्य प्रोग्रामहरु पनि थपघट गर्न सकिने आइडियामा हामीले काम सुरु गर्ने निर्णय गर्यौँ । मैले ने'तृत्व गर्नेगरी एउटा टोली बन्यो । जसमा मसहित इन्
Sep132020 by Nepal KhabarNo Comments
असोज १ गते घरघरमा दीप प्रज्व’लन गर्न सरकारको आग्रह…हेर्नुहोस् ।
काठमान्डौ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी असोज १ गते स्वा’स्थ्यकर्मी र को'रोना संक्र'मितहरूको म’नोबल ब’ढाउन राति ८ बजे दी’प प्र’ज्वलन गर्न सबैमा आ’ग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य से'वा विभागका उपचार सेवा महाशाखा प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलले सम्पूर्ण स्वास्थ्यक'र्मीहरूको स’म्मान र संक्र'मितहरुको म’नोबल ब’ढाउन घर घरमा दीप प्र’ज्वलन गर्न सबैलाई आ’ग्रह गरिएको जानकारी दिए। विश्व वि’रामी सुरक्षा दिवसको अवसर मन्त्रालयले दीप प्रज्वलन गर्न सबैमा आ’ग्रह गरेको डा. पोखरेलले जनाए। यस्तै सोही समयमा को'रोनाबाट मृ’त्यु भएकाको स’म्झनमा एक मिनेट मौ’नधारण गर्न समेत म’न्त्रालयले आ’ग्रह गरेको छ। साथै असोज ७ गते स’म्पूर्ण स्वा’स्थ्यक'र्मीको स’म्मानमा मा’इतिघरमा दी’प प्र’ज्वलन गर्ने स्वा'स्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको त’यारी छ ।
Sep122020 by Nepal KhabarNo Comments
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समयमै बन्छ : मन्त्री भट्टराई ! यस्तो बन्दैछ हेर्नुहोस् । (भिडियो सहित)
कास्की पोखरा : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले पोखरा क्षे'त्रीय अन्त'र्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको उक्त विमानस्थल निर्माणको आज स्थलगत निरी'क्षण गर्दै उनले को'रोना सङ्क्र'मणका बाब'जुद विमान'स्थलको नि'र्माण निरन्तर भइरहेको बताए । विमानस्थललाई नि'र्धारित समयमा नै सम्पन्न गरी यसको स'ञ्चालन गराउने कुरामा सरकार लागिरहेको उल्लेख गर्दै उनले को'रोना सङ्क्र'मणका कारण साधन श्रो'त एवम् जन'शक्ति अ'भाव हुन नदिन सरकारका त'र्पबाट आवश्यक स'हजीकरण गर्नेमा विश्वस्त तुल्याए । उनले नि'र्धारित लक्ष्यअ'नुसार नै सन् २०२१ भित्रमा विमानस्थल निर्मा'ण सम्पन्न भएर स'ञ्चालनमा आई अन्त'र्राष्ट्रिय उ'डान शुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे । कोरो'नाका कारण झ'ण्डै छ महिनायता रो'किएका आन्त'रिक एवम् अन्तर
Aug32020 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौं : कालापानी सहितको नक्सा जारी गर्ने बेला नेपालका राजनीतिक द'लहरु एक'जुट बने । बन्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो, आफ्नो भू'मि फि'र्ता ल्याउन बढ्दो जनद'बाब । तर, नक्सा जा'रीपछि नेपालले भारतले अति'क्रमण गरेको जमिन फि'र्ता ल्याउन खासै पहल गर्न सकेको छैन । बरु सत्ता'रुढ नेकपा आफ्नै किच'लो अलम'लिएको छ । सीमा सम्बन्धी विषयमा दुई सय वर्षपछि नेपालले पू'र्ण नक्सा जारी गरेर एक कदम अघि बढाएको त छ, तर भू'मि फि'र्ता ल्याउन ठो¥स क'दम चाल्न सकेको छैन । भारत सहजै वा'र्ताका लागि आउँछ भन्ने विश्वास पनि देखिदैन । नेपाल र भारतका प्राथतमिकता फरक–फरक छन् । भारतले निरन्तर नेपाली भू'मि अ'तिक्रमण जारी राखेको छ । पछिल्लो उदाहरण कञ्चनपुरको बेलौ'री नगरपालिका पनि हो । भारतले स्ट्रिप नक्साका आधारमा भू'मि आफ्नो भएको दा'बी गर्दै आएको छ । उ १८२ स्थानमा स्ट्रि'प नक्सामा हस्ता'क्षर गर्नुपर्ने प्रस्ता'व राख्छ । त
Jul272020 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौं : लोड-सेडिगं अन्त्य गरेर चर्चामा आएका कुलमान घिसिङको कार्यकाल अर्को महिना सकिन लागेको छ । आउँदो भदौ २९ गते उनको कार्यकाल सकिन लागेको हो । आफ्ना कार्यकालमा धेरै राम्रा काम गरेर जनताका मनमा बास बस्न सफल उनी २०७३ सालको भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्राधि'करणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । अब उनलाई सरकारले दोहो¥र्‍याउछ वा दोहो¥र्‍याउदैन त्यो भने हेर्न नै बांकी छ । घिसिङलाई अर्को ४ वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ती गर्नको लागि कुनै ऐन, नियम बा'धक छैनन् । यसमा विभागीय मन्त्री वर्षमान पुन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयमा भर पर्छ । देशले सधै हिउँदमा दैनिक १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ भागेको थियो तर कार्यकारी निर्देशक घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नि'युक्त भएपछि २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाण्डौ उपत्यकालाई लोडसे'डिङमुक्त बनाएक
Jul222020 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्यु'निष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४२ औं स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँप्रति श्र'द्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ । ४२ औं पुष्पलाल स्मृ'ति दिवसको अवसरमा श्र'द्धासुमन अर्प'ण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएकाे छ । उहाँले का'र्ल मा'र्क्स र फ्रे'डरिक एङ्गे'ल्सद्वारा लिखित वि'श्वप्रसिद्ध क'म्युनिस्ट घो'षणा पत्रका प्रथम नेपाली अनु|वादक, नेपाली कम्यु'निष्ट आन्दोलनका संस्थापक नेता, बाम–लोक'तान्त्रिक संयुक्त जन–आन्दो'लनका वैचारिक प्र'णेता हुनुहुन्छ ।’ पुष्पलालको अगुवाईमा नेपाल कम्यु'निस्ट पार्टी स्थापना गर्नु अगाडि पनि नेपालमा कम्यु'निष्ट नेता र कार्यकर्ता थिए तर, कम्यु'निष्ट आन्दो'लनको ब्यवस्थित राजनीतिक र सांगठनिक आकार थिएन प्रधानमन्त्रीद्वा'रा हस्ता'क्षरित वि''ज्ञप्तिमा भनिएको छ । कमरेड पुष्पलालकै अगु'वाईमा कम्यु'निष्ट आन्
Jul192020 by Nepal KhabarNo Comments
सरकारले साउन २१ देखि आन्तरिक र भदौ १ बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने तयारी…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
काठमाडौं, ४ साउन । को'रोना भाइ'रसले विश्वको अर्थ'तन्त्र थ'लिदा नेपालको अवस्थामा पनि उही छ । अझ सबैभन्दा ठूलो असर यस्ले प'र्यटन क्षे'त्रलाई पनि पारेको छ । नेपालले भिजिट नेपाल ट्वान्टी ट्वान्टी जस्तो २० लाख पर्यटक भित्र्या'उने महत्वा'कांक्षी यो'जनाको ढोकामा पुगेर फर्कनु परेको पी'डामा छ । नेपालले भो¥ग्नु परेको यो क्ष'ति अ'कल्पनीय छदैछ । तर नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई उठाउन सरकारले बजेटदेखि मौद्रि'क नीतिसम्मका पानाहरुमा मेहनत गरेको छ । यसै'क्रममा न्यूज २४ टेलिभिजनसंग कुरा गर्दै संस्कृ'ति, पर्यटन तथा नागरिक उ'ड्ड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले मा'रमा परेको पर्यटन उद्योगलाई नयाँ ढंगले चलायमान गराउने तयारी सरकारले थालिसकेको बताउनु भएको छ । उहाँले यही क्रममा सरकारले आन्तरिक तथा अन्त'र्राष्ट्रिय उ'डान खोल्ने तयारी गरिरहेको जा'नकारी दिनुभएको छ । को'रोना सं'क्रमण फै'लिन थालेपछि बन्द गर
Jul132020 by Nepal KhabarNo Comments
बजारमा सस्तो मुल्यमा भेन्टिलेटर ल्याउनको लागि भेन्टीलेटरको उत्पादनमा स्ट्यानफर्ड विश्व-बिद्यालय सगँ सहकार्य गर्दै महाबिर पुन…हेर्नुहोस् ! सेयर गर्नुहोस् ।
काठमाडौँ : महावीर पुनको रा'ष्ट्रिय आवि'स्कार के'न्द्रले अमेरिकाको स्ट्या'नफर्ड विश्व-विद्यालयसँगको सह'कार्यमा अत्य'धिक सस्तो मूल्यमा भे'न्टिलेटर नि'र्माणको काम अघि बढाएको छ । महावीर पुनका अनुसार सफल रूपमा उत्पादन पूरा भएपछि यो भेन्टि'लेटरको लागत एक लाख रुपैयाँ मात्र हुनेछ । अहिले सामान्य भेन्टि'लेटरलाई पनि कम्तिमा २० लाख रुपैयाँ पर्छ । यो भेन्टि'लेटरको उत्पादन सफल भए पनि बजारमा आउन भने धेरै चर'ण पार गर्नुपर्नेछ । स्ट्या'नफर्ड विश्व-विद्यालयले भेन्टि'लेटर विकास गरिरहेको भए पनि प्रयोगमा भने ल्याएको छैन । यो भेन्टि'लेटरले अन्य भेन्टिलेटरले जस्तै काम गर्ने दा'बी गरिए पनि अहिलेसम्म प्रमाणित भने भइसकेको छैन । आ'विस्कार के'न्द्रले यो भेन्टि'लेटर कम्तिमा दुई हप्तामा तयार गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । त्यसका लागि स्ट्या'नफर्ड विश्व-विद्यालयले भेन्टि'लेटरका लागि आवश्यक पर्ने सेन्सर र मोडल पठा
काठमाडौ : यिनी हुन् हेलि'कप्टर उडाएर मानिसहरुको ज्यान बचाउने नेपालकी एक मात्र महिला उ'द्धार पाइलट ३१ वर्षकी प्रिया अधिकारी नेपालकी एकमात्र महिला उ'द्धार पाइलट हुन् । प्रिया सगरमाथाको उ'चाइभन्दा माथिको उचाइमा हेलि|कप्टर उडाएर मानिसहरुको ज्या'न बचाउँछिन् र त्यहाँ पुगेका स'हयोगीलाई स¥हयोग गर्छिन् । म प्रिया डा'क्टर बन्न चाहन्थिन् तर एउटा भेटले उनलाई पाइलट प्रे'रित गर्यो । उ¥द्धार पाइलटको जुन जिम्मे'वारी छोडेर आधा द'र्जन युवतीहरु भाग्छन् उनले त्यही करिअर रोजेकी छिन् । प्रिया ३० जना पुरुषको टिममा एक्ली महिला हुन् । उनले ९ वर्षको समयमा सगरमाथाको आसपासबाट १ हजारभन्दा बढीलाई उ'द्धार गरिसकेकी छिन् । उनले हिमाल चढ्ने आशमा आएका धेरै पर्व'तारोहीको बीच बाटोमै मृ'त्यु भएको देखेकी छिन्। यस्तै पर्वता'रोहणका क्रममा आउने थुप्रै अव'रोधहरुको सा'क्षी बसेकी छिन्। दैनिक उ'द्धार कार्यमा ख'ट्दा उनले